काठमाडौँ । महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड र एमएडब्ल्यू वृद्धि कमर्सियल भेहिकल्स प्रा. लि.बीच शुक्रवार एक सम्झौता भएको छ । कमर्सियल भेहिकल्स खरिद गर्न चाहने ग्राहकहरुलाई सरल तथा सुलभ तरिकाबाट कर्जा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सम्झौता...
काठमाडौँ । सानिमा बैंकले काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थलाई बाल अस्पताल निर्माणका लागि एक करोड सहयोग गर्ने भएको छ । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत १ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर...
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलको खुद नाफामा छलाङ मारेको छ । बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विरण अनुसार १ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । अघिल्लो आर्थिक...
काठमाडौँ । आफ्नै हात जगन्ननाथ भने झै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्स)का सीइओ चन्द्र सिंह साउदले आफ्नै श्रीमतीको नाममा स्वार्थ बाझिने गरि हजारौं हजार शेयर शेयर खरिद गरेको भेटिएको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । नेप्सेका...
काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले एकैपटक तीन हाइड्रोपावर कम्पनीलाई प्राथमिक साधरण सेयर (आइपीओ) निष्काशन गर्न अनुमति दिएको छ । बोर्डले तीन कम्पनीलाई प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ दरले १ अर्ब ५७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड...
मेगा बैंकले दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका ग्राहक परिवारलाई रु.७ लाख हस्तान्तरण
काठमाण्डौ । दुर्घटनामा परी असामयिक निधन भएका ग्राहकका परिवारलाई मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले बीमाबापत ७ लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको छ। मेगा बैंकमा ‘मेगा कर्पोरेट बेनीफिट सेभिङ अकाउन्ट’ खोलेका हिमालय गुरुङका परिवारलाई मेगा बैंकले सोही खातामा...
काठमाडौँ । बढे पनि कमाउने घटे पनि कमाउने त्यस्तो कुनै ब्यबसाय होला ? धेरैलाई ओरालो लाग्दा पनि कसरी कमाउने हो भन्ने लाग्नु स्वाभाविक हो। तर सेयरको कारोबार गर्ने र गराउने ब्रोकरका हकमा भने यी कुरा...
काठमाडौँ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बजेट संशोधन नभई मौद्रिक नीति सार्वजनिक नगर्ने भएका छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट नयाँ सरकारले संशोधनको तयारी गरेपछि राष्ट्र बैंकले बजेट संशोधनपछि मात्रै मौद्रिक नीति ल्याउन तयारी...
काठमाडौँ । वाग्मती प्रदेश सरकारले विद्युतीय बसको चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि काठमाडौं उपत्यकालगायत सात स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराएको छ । आगामी २०७९ साल जेठको तेस्रो हप्तादेखि उक्त बस सञ्चालन गर्न हेटौँडास्थित वाग्मती प्रदेश यातायात व्यवस्थापन...
काठमाडौँ । सेयर बजारमा दोहोरो अंकको करेक्शन आएके छ । बुधबार इतिहासकै सर्वाधि विन्दुको कीर्तिमान बनाएको बजारमा आज करेक्शन आएको हो । तीव्र उतरचढाव देखिएको बजार यस साता समग्रमा करिब २२ अंकले बढेको छ । सूचकसँगै...